Kuthelwe othulini osomatekisi ababili | IOL Isolezwe
Kuthelwe othulini osomatekisi ababili
Isolezwe / 21 February 2013, 10:31am / LUNGI LANGA noMBALI KHANYILE
20/01/13 DURBAN: ABESILISA ababili basale bedindilizile emgaqweni emva kokudubula okubekhona ngaserenki yamatekisi eMakethe ku Warwik junction. ISITHOMBE;NQOBILE MBONAMBI
ABEZIMO eziphuthumayo namaphoyisa kuKhuzimpi Shezi obewaziwa ngoWilliams road emva kokudutshulwa kwabesilisa okusolakala ukuthi abashayeli eThekwini ISITHOMBE BONGANI MBATHA
AMAPHOYISA nabezimo eziphuthumayo kwabezingozi emva kokudutshulwa kubulawe abesilisa kuKhuzimpi Shezi izolo ekuseni ISITHOMBE BONGANI MBATHA
LUNGI LANGA noMBALI KHANYILE
UBUNGAFUNGA ukuthi kudlala ifilimu edolobheni eThekwini emgwaqweni omkhulu uKhuzimpi Shezi (Williams) oxhuma kuPixley kaSeme (West Street) ngesikhathi kuqhuma inganono kwasala enkundleni osomatekisi ababili ngezikhathi zehora lesishiyagalolunye ekuseni.
Emuva kwalesi sehlakalo sokuduma kwezulu lezandla kuzwakale ubumayemaye abantu bebaleka ngoba kungaqondakali ukuthi inhlamvu iqhuma ngakuphi. Kuthiwa lesi sehlakalo sihlobene nengxabano okusolakala ukuthi iphakathi kososeshini bamatekisi ahambela e-Eastern Cape.
Omunye wabantu abazibonele ngawabo nongathandanga ukudalula igama lakhe uthe kuqhamuke imoto ebigcwele iqulu labantu besilisa abavele bavulela ngenhlamvu kosomatekisi abebemile erenki yamatekisi ahambela i-Eastern Cape.
“Kusakazeke wonke umuntu kubalekwa ngesikhathi kuqhamuka imoto ivulela inhlamvu kosomatekisi abebeme erenki. Amadoda abehamba ngale moto abengenandaba nokuthi kukhona abagibeli kangangoba kuze kwasiza ukuthi sibaleke ukuze singadubuleki,” kusho osinde emvuleni yezinhlamvu ezibulale osomatekisi ababili.
Ngokusho kwamaphoyisa amadoda abalelwa kwamathathu adedele intululwane yenhlamvu kule renki ekuseni adubula abantu abane. Kubulawe abanikazi bamatekisi ababili oyedwa ona-52 omunye ona-53. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Thulani Zwane, uthe amanye amadoda ayisikhombisa alimele alaliswa esibhedlela kodwa ababili babo basolwa kulesi sigameko.
UZwane uthe kusolakala ukuthi kunokungezwani phakathi kososeshini ababili abangeke bakwazi ukuwadalula okwamanje.
Uthe ngaphandle kwalona osesibhedlela kukhona omunye umsolwa oboshiwe ngalesi sigameko.
“Singasho ukuthi siphenya amacala amabili okubulala, amabili okuzama ukubulala,” kusho uZwane.
UMnuz Wellington Ndelu, weSonqoba Simunye Taxi Association yamatekisi ahambela eSouth Coast (Lusikisiki naseFlagstaff), uthe namanje basathukile ngokubulawa kwamalungu kasoseshini wabo abulewe ekuseni izolo.
“Ekuseni kufike amaphoyisa ngoba ethi athole umbiko othi kukhona abanezibhamu kusoseshini wethu. Ngempela babaseshile bazithola kodwa ngoba zonke bezinamalayisensi bazibuyisela kubo. Kodwa kuphele imizuzwana nje kwase kusho inhlamvu,” kuchaza uNdelu.
UNgqongqoshe woMnyango wezokuThutha, uMnuz Willies Mchunu, ukugxekile ukubulawa kwabamatekisi. Unxuse umasipala ukuthi uvale irenki yamatekisi njengoba ethe ayikho emthethweni.
UMchunu uchaze isigameko sokubulawa kosomatekisi njengesidabukisayo nesingamukelekile.
“Akwamukeleki ukuthi abantu bangahlasela babulale abanye emini kwabha babeke nomphakathi engozini. Siyaluhlaba udlame ikakhulukazi njengoba luphazamisa edolobheni futhi lungaphazamisa nokusebenza kwezinto zokuthutha. Sinezingxoxo noMnyango wezokuThutha e-Eastern Cape ukuze siqhamuke nesisombululo ngalesi sigameko,” kusho uMchunu.
Uthe useyalele uMnyango wakhe ukuthi ubize umhlangano ophuthumayo nososeshini abathintekayo.